विप्लवका कार्यकर्तालाई के हुन्छ ? शान्तिपूर्ण भेला वा कार्यक्रम भए पनि पक्राउ गर्ने नीति - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
विप्लवका कार्यकर्तालाई के हुन्छ ? शान्तिपूर्ण भेला वा कार्यक्रम भए पनि पक्राउ गर्ने नीति
काठमाडौं । प्रहरीले नेक्रवित्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमाथि निगरानी बढाउने र शान्तिपूर्ण भेला वा कार्यक्रम भए पनि पक्राउ गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि उसका सबै गतिविधि निस्तेज बनाउन प्रहरीले कारबाही अगाडि बढाउने भएको हो ।
प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने नागरिकको संवैधानिक हक भए पनि सरकारको नीतिअनुसार चन्द समूहलाई त्यस्तो गतिविधि गर्ने छुट नभएको बताए । ‘आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नले शान्तिपूर्ण भेला हुन पनि पाउँदैनन्,’ उनले भने ।
प्रहरीले चन्द समूहमा आबद्ध हुनेजतिलाई पक्राउ गर्ने र हिंसात्मक तथा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भेटिए फौजदारी अपराधको मुद्दा चलाउने र सामान्य गतिविधि वा भेला मात्रै गरेको भए सार्वजनिक सुरक्षा ऐनअनुसार कारबाही गर्ने नीति अख्तियार गर्ने देखिन्छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ।
कुन जिल्ला कुन पक्षलाई ? केन्द्रका मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म इन्चार्ज
काठमाडौं । पूर्वएमालेले भूगोलका ४१ र महानगरका ४ वटाको नेतृत्व पाएको छ । ती जिल्लामा ताप्लेजुङ, झापा, मोरङ, […]
भारतीय रअ प्रमुख नेपालमा
काठमाडौं । भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख समान्तकुमार गोयल आइतबार नेपाल […]
आफ्नै बमले आफैं मारिँदै विप्लव कार्यकर्ता
काठमाडौं । करिब तीन महिनाको अवधिमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ६ जना नेता […]
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाको सञ्जाल भूमिगत शैलीमा चलेको छ। सरकारले प्रतिबन्ध लगाए […]
यी हुन् नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज,कुन जिल्लामा को ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले जिल्लाका इन्चार्ज र सहइन्चार्जको टुंगो लगाएको […]
विप्लवलाई ठूलो झड्का ! उपत्यका ब्युरो इन्चार्ज माइला लामा पक्राउ
काठमाडौं । सरकारसँग वार्ताको पहल भइरहेका बेला प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय […]